ISLAAXOOW; Sh Maxamad Macallin iyo Dr Alturaabi ku dayda! | Explorations in History and Society
Dr Xasan Alturaabi Allaha u naxariistee, ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Kharduum. Alturaabi, wuxuu ahaa, aqoonyahan, halbuur, mufakir iyo siyaasi, si fiican looga yaqaan, dunida Muslinka, xilal sarana ka soo qabtay dalkiisa Suudaan.
1994 ayaa loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka Suudaan,1998na waxaa loo doortay xoghayaha guud ee xisbiga haya talada Suudaan, oo uu hore xubin uga ahaa, inta uusan 2001dii ebyin xisbiga Almu’tamar Alshacbi ee mucaaradka ku ah Albashiir, oo uu ku mutay, in marar badan la xiray, waliba isaga oo da’ ah, loona xiray kaliya, maxaad nooga go’day, nooga hortimid iyo noona mid ahayn? Islaannimooy xaal qaado! War diinta iyo siyaasadda noo ka la saara!
Dhanka kale, Sheekh Maxamad Macallin, oo geeriyooday 2000, wuxuu ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed, kuwooda ugu aqoonta iyo ogaalka badan; diin, dhaqan iyo afba. Waxaa xirtay, dawladdii militeriga inta u dhaxaysay 1976 illaa 1984 haddana, ka ma leexin, in uu ku sii dhegganaado aragtidiisii eheed, fidinta diinta iyo baraarujinta bulshada, si nabdoon iyo nuglaan ku jirto.
Ujeedka aan uga socdo qormada waa, maalmihi Maxkamadaha oo aan qorayey qormooyin digniino iyo dardaaran warin isugu jira, oo ay ka mid yihiin; “QABSATAYE MA QARAMAYN KARTAA?!” ayaa nin aad u taageersanaa Maxkamadaha waxaan ku iri: “Ma la waayey wadaad diinta Islaamka dhaqankeenna noogu fasira? Maxaa maalin walba dariiqad Sheekh ama urur Carbeed naloogu soo dhoofinayaa?” wuxuu igu yiri: “Mar kale iigu celi?”. Haddaan ugu celshay, buu igu yiri: “Waligay ma maqal”. Waxaan ku iri: “Haddaba maqale, bal maankaaga gali”.
Alturaabi, xilalka sare, ee uu ka hayey xisbiga iyo dalkaba, wuxuu ku waayey, waxaa ugu weynaa, aragtidiisa ku dhisneed, in aragtida IKHWAANNIMADA ku dhaqankeeda la SUUDAANEEYO, oo ka dhigan, in laga go’o u xajinta Masar iyo ka la talo qaadashada madaxda IKHWAANKA Masar.
Alturaabi, aragtidaa wuxuu ku mutay, in xilalkii laga xayuubiyey, loona arkay mid dhib ku ah danaha ururka IKHWAANKA iyo aragtidiisa ku aaddan maamulka dadyowga dalalka kale ka soo jeeda, ee waliba dawladahaa xilal ka haya, waana la fogeeyey.
Alturaabi, yuusan taageero xooggan iyo ku mudan mansab, haddana, aragtidiisa eheed, in laga haro hoggaanka IKHWAANKA Masar aqoonyahanno kale, oo dalal kale ka soo jeeda ayaa ka la midaysanaa, lana hirgeliyey, sida Sheekh Maxamad Macallin Eebbe ha u naxariistee, oo isna qabay, in IKHWAANNIMADA la SOOMAALIYEEYO, oo intii la qaadatay aragtidaa loo baxshay; “AALA SHEEKH!” oo ay hadda ku midaysan yihiin badi ururka Daljir. Noqoshoda Sheekh Maxamad Macallin iyo Dr Xasan Alturaabi mufakiriin madax bannaan, oo aragtidooda xor ah, labadan aqoon yahan, waxay ku muteen; goyn uga timid dhanka IKHWAANKA Masar, oo ay xiriirka u jareen.
Dr Alturaabi iyo Sheekh Maxamad Macallin Alle ha u wada naxariistee, aragtidii ay qaateen, ku qanceen walibana ay dhaqangalsheen, waxaa 20 sano ka dib, garwaaqsaday IKHWAANKA Urdun, oo sanadka horraantiisa ku dhawaaqay, in ay aragtida IKHWAANKA iyo ka la saaridoonaan ku xirnaanta Masar. Taas waxay kuu muujin, in labadaa aqoonyahan, waliba Sheekh ay ayaaheen horyaallo iyo horseed aan hadalkooda iyo hawraartooda dhag jalaq loo siin, gaar ahaan labada dal, ee ay ka soo jeedaan.
Labada Sheekh iyo aqoonyahan, waxay cusboonaynta aragtida diimeed, deegaanaynta IKHWAANKA ka sokow, ay ka midaysnaayeen ka qaybqaadashada dib u heshiisiintii ka dhacday labada dal; Soomaaliya iyo Suudaan. Dal jacayl iyo dad jacayl.
Si kasta, oo looga aragti duwanaa, laguna ka la aragti duwanaan karo aragtida ay qabeen labadaa Mufakir, Maxamad iyo Alturaabi, haddana, waxaan la is ku maandhaafsanayn, in ay ahaayeen, doodayaal, aftahanno iyo aqoonyahanno ku sheeggan ogaal iyo aragti, aadna isugu kalsoon. Labo fogaan arag iyo geesi, aan helin dad la falgala, feker, faallo iyo falanqayn iyo dal faayadhawra, faquuq ka dheereeya ama fahamkooda dhaqangeliya.
Marka ISLAAXOOW, tacsi kaliya waxba u ma tarto labada WADAADE, aragtidoodii iyo aqoontoodii furneed, oo kale la kaalaya, waxaadna ku heli kartaan, in aad ku dayataan oo kali ah. Ma ahan, in ay waajib tahay, balse, dhaxalka ay ka tageen ayaa ah, mid labada bulsho wada anfacaya, una baahan yihiin, ee is ku daya, in aad ku badbaadisaan.
Dhawrista ka la duwanaashaha, baahinta aragtiyaha furan, ku dhiirrashada gudbinta fekerka, nabadaynta, dhisidda tusmooyin iyo tusaalooyin bulshada lagu dhawro. Ku dayda labaa tiir, haddii IKHWAANNIMADU idin ka tahay u adeegga dadka iyo dalka.
Nasiib Bunda, a forgotten Somali (1800-1900’s) ADIGA QABIILKAA?! Faallo